किन हुन्छ हृदयघात ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय किन हुन्छ हृदयघात ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय Canada Nepal
किन हुन्छ हृदयघात ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथामका उपाय
डा. शिवजी सिलवाल - मुटुरोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्नसकिने भए पनि यो विश्वव्यापी रूपमा पुरुष तथा महिला दुवैको मृत्युको प्रमुख कारक हो । हरेक देशको स्वास्थ्य सेवासुविधा, जनताको जीवनशैली र देशको आर्थिकस्तर फरक फरक हुने हुँदा मृत्युको कारक पनि फरक फरक हुने गर्छ ।
हृदयाघात भएका बेला त्यसका लक्षण करिब ३० मिनेट वा बढी समयसम्मका लागि रहन सक्छ । जेसुकै भए पनि यदि हृदयाघात भएको शंका भएमा तपाईंले तत्कालै हृदयरोग उपचार केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । साथै, त्यस अवस्थामा एक ट्याब्लेट एस्पिरिन (३०० मि. ग्रा.) बिरामीलाई तत्कालै खुवाइदिनुपर्छ । तत्कालै गरिएको उपचार बिरामीको मुटुमा धेरै हानि हुनुबाट जोगाउने एक उपयुक्त तरिका हुनसक्छ । (मुटुरोग विशेषज्ञ सिलवाल नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छन्)
आश्विन १३, २०७८ बुधवार १८:४५:३७ बजे : प्रकाशित